Ukufaka isicelo sedivosi ngosizo olusemthethweni? Silapha ukukusiza
Umthetho Wesehlukaniso » Ukufaka isicelo sedivosi
Ngabe ufuna ukufaka isicelo sesehlukaniso? Ngemuva kwalokho udinga ummeli wokuxazululwa ngokusemthethweni kwesehlukaniso sakho. Law & More isilungele ukukusiza. Lapho nje wena noshade naye nihlukanisa, kuphakama imibuzo ebalulekile.
THOLA UKUXHUMANA NO LAW & MORE
Ukufaka isicelo sedivosi
Ngabe ufuna ukufaka isicelo sesehlukaniso? Ngemuva kwalokho udinga ummeli wokuxazululwa ngokusemthethweni kwesehlukaniso sakho. Law & More isilungele ukukusiza.
> Isehlukaniso ngokubonisana
> Isehlukaniso esingathandani nabanye
> Isivumelwano sesehlukaniso
> Uhlelo lokukhulisa izingane
> Isehlukaniso nezingane
Lapho nje wena noshade naye nihlukanisa, kuphakama imibuzo ebalulekile.
• Iziphi izinto ezihilelekile ekuhlukaniseni?
• Ubani ozoqhubeka nokuhlala ekhaya futhi ngubani ozoshiya indlu noma uzothengiswa yindlu?
• Inakekelwa kanjani ingane yakho (ren)?
• Kuvunyelwani maqondana nokukhokhwa kwengane nomlingani womlingani?
• Futhi yiziphi izivumelwano ozenzayo mayelana nokwabiwa kwezimpahla zakho?
Ngabe udinga usizo lwezomthetho ngokuxazulula isehlukaniso sakho, ukubhalwa kwesivumelwano sesehlukaniso kanye nohlelo lokuba ngumzali? Law & More kuzokusiza ukuqeda isehlukaniso sakho. Abameli bethu banolwazi olukhethekile emkhakheni wezomthetho womndeni. Sizokusiza uma ufisa ukufaka isicelo sesehlukaniso noma uma wena nomlingani wakho nifisa ukuhlela isehlukaniso ngesivumelwano sobabili.
Udinga ummeli wedivosi?
Isehlukaniso isikhathi esinzima. Sikusiza kuyo yonke inqubo
Uma wena nomlingani wakho niyakwazi ukubonisana futhi nifinyelele izivumelwano ndawonye, ​​sizokusiza wena nomlingani wakho ekwenzeni izivumelwano ezicacile ngesikhathi semihlangano ehhovisi lethu. Ngemuva kokuthi kwenziwe izivumelwano mayelana nesehlukaniso, siyaqinisekisa ukuthi lezi zibhalwe ngokufanele esivumelwaneni sesehlukaniso kanye necebo lobuzali elingaba khona. Lapho isivumelwano sesehlukaniso sesakhiwe futhi sisayinwe nguwe nomlingani wakho, inqubo yesehlukaniso kwesinye isikhathi ingaqedwa ngokushesha.
Isehlukaniso esingathandani nabanye
Ngeshwa, ukungezwani phakathi kwalabo abalingani babo kwesinye isikhathi kuphezulu kakhulu, kangangokuba akusekho ngqondo ukubamba ukubonisana nokufinyelela izivumelwano zokuhlangana. Ngemuva kwalokho ungafika kithi ukuthola usizo lochwepheshe lommeli wedivosi ozokuxoxela zonke izici zomthetho. Sihlose ukuzuza umphumela omuhle kakhulu kuwe. Ngokwenza kanjalo, sibheka ngokucophelela isici ngasinye somthetho. Isivumelwano sesehlukaniso kanye nohlelo lokuba ngumzali yisisekelo sekusasa lakho nekusasa lengane yakho (ren). Kungakho kubaluleke kakhulu ukucabanga ngokuqukethwe yalama dokhumenti ndawonye ne Law & More ummeli. Ngale ndlela ungaqiniseka ukuthi zonke izivumelwano zizofakwa ephepheni ngendlela eyiyo esemthethweni.
Isivumelwano sesehlukaniso, kusho ukuthini lokho? Isivumelwano sesehlukaniso yisivumelwano esibhaliwe phakathi kwakho nomlingani wakho. Isivumelwano siqukethe zonke izivumelwano eziphathelene, phakathi kokunye, i -onyony yozakwethu, ukwabiwa kwemiphumela yasekhaya, ikhaya lomshado, impesheni nokusatshalaliswa kwemali. .
Uhlelo lokukhulisa izingane
Ingabe unazo izingane ezincane? Uma kunjalo, kuphoqelekile ukudweba uhlelo lokuba ngumzali. Isivumelwano sesehlukaniso kanye necebo lokukhulisa izingane zombili ziyingxenye yesicelo sokufaka isicelo sesehlukaniso. Ehlelweni lokuba ngumzali, kwenziwa izivumelwano mayelana nesimo sempilo yezingane, ukusatshalaliswa kwamaholide, izivumelwano maqondana nokukhuliswa namalungiselelo wokuhambela. Sizokusiza ukuthi wenze futhi urekhode izivumelwano. Siphinde senze ukubalwa kwe-alimony yengane.
Izakhi ezilandelayo ziyisibopho:
• Ukwahlukaniswa kwayo yonke imisebenzi yokunakekela nokukhulisa izingane;
• Izivumelwano eziphathelene nendlela enokwazisana ngayo ngezingane;
• inani nesikhathi se-alimony wena noma umlingani wakho oyosikhokhela ekukhulisweni kwezingane;
• Izivumelwano zokuthi ubani okhokha izindleko ezikhethekile, njengokukhempa ngezimpelasonto enkundleni yezemidlalo.
Ngokungezelwa kwezingxenye zokuphoqelelwa, kuwukuhlakanipha ukwenza izivumelwano mayelana nezihloko wena nomlingani wakho abazibona zibalulekile. Ungacabanga ngezivumelwano ezilandelayo:
• Izivumelwano mayelana nokukhethwa kwesikole, ukwelashwa kanye nama-akhawunti okonga;
• Imithetho, ngokwesibonelo ngezikhathi zokulala nesijeziso;
• ukuxhumana nomndeni, njengogogo nomkhulu, ogogo, omalume kanye nobabekazi.
Ukufaka isicelo sesehlukaniso akugcini nje ngokuba nomthelela omkhulu ezimpilweni zakho nophathina wakho, kodwa nakwezengane yakho (ren). Isehlukaniso sizophumela ekutheni umlingani wakho abe ngumlingani wakho wangaphambili. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi umlingani wakho naye uzoba ngumzali wangaphambili. Ukusebenza nophathina wakho wangaphambili phakathi nangemva kwesehlukaniso kudinga umzamo omkhulu. Noma kunjalo, abazali ababambisana nabo babaluleke kakhulu enhlalakahleni yezingane. Akukho ukuxhumana noma okonakele kokunye nabazali kungaba nemiphumela emibi kakhulu enganeni. Noma ngabe unezingane ezincane noma ezindala, kubalulekile ukuthi izintshisekelo zazo zibhekwe ohlelweni lokwehlukanisa..
Ukuqinisekisa ukuthi izingane zakho zihlupheka kancane ngangokunokwenzeka kusukela kwesehlukaniso, kubalulekile ukwenza izivumelwano ezicacile. Sikunikeza izeluleko zomthetho futhi sixoxisane egameni lakho.
Bese usithinta ngocingo +31 40 369 06 80 noma usithumelele i-imeyili: